Uma uyikha phezulu le phambi komuntu entanyeni elise yegilo indlala, okuyinto has simise ukhamba nesisindo 20-40 amagremu. Nokho, lapho ukugula kwakhe umuntu omuhle futhi beqiniseka kungaba obukhulu noma mncane, bengenandaba noma wethuke, ukuhluthuka, ungase ubone eziningi izifo. Lonke iphuzu ama-hormone. Kutfutfukisa yegilo yabo indlala. Ngaphandle kwawo, umzimba uqala ngokushesha ukuwohloka, futhi umuntu buthakathaka namasosha omzimba futhi ekuthuthukiseni endocrine isifo okuthiwa goiter. Izimpawu ze-ke akuzona ngokushesha, umuntu isikhathi eside bangase bangazizwa ukungakhululeki. Kodwa ngaphandle ukwelashwa esifike ngesikhathi, lesi sifo ngeke uthuthuke.
Kuye ukwehla noma ukwandisa umsebenzi indlala yegilo ziyizinhlobo ehlasela umzimba wonke, nodular kanye okuxubile goiter.
Lapho i-hyperthyroidism, le ndlala yegilo ikhiqiza amanani ngokweqile kwama-hormone. Isici isici ke - goiter. Izimpawu zihlanganisa ishayela ngokushesha, ukushisa komzimba, iminwe ethuthumela, ukujuluka, ekuseni (iminyaka engu-20 ubudala) gray. Thola isifo ngokusebenzisa ukuhlolwa igazi sama-hormone egilo. Izimbangela hyperthyroidism kungaba ukucindezeleka kwengqondo, okubi kakhulu ezinye izifo.
uhlobo lakhe nzima kakhulu - Graves 'disease ivame, izimpawu izimpawu okukhulu kwesisindo, ukucasuka, isandla Isakhiwo sazamazama, palpitations inhliziyo, ukujuluka, vylezanija zamehlo, umbono double. Lesi sifo ngokuvamile eyaziwa ngokuthi "i-hyperthyroidism."
Kodwa i-hypothyroidism landile - ukuntuleka hormone, okusho yokuntuleka izinhlayiya ezincane obumba nokuxhumana yamakhemikhali ahlukahlukene emzimbeni. Lezi zinhlayiya zishukumisa kwezimila kwezicubu, ukukhuthaza umoya-mpilo zabo ukusetshenziswa izinga ilawulwa amaprotheni zamagama, kanye insulini kanye epinephrine, ukunikeza ukulethwa amino acid kanye ushukela kumaseli.
Amaseli hormone egilo tekwakha kumelwe ukuncela okwanele iodine kusukela egazini, okuyinto ikhashelwa umzimba umkhiqizo kanye emkhathini kuma. Nokho, emiphakathini eminingi, etholakala kude kolwandle, i-iodine akwanele. Kulezi zindawo baphile abantu abayizigidi ezingu-250. Namuhla, ngakho-ke, nokuvimbela ukuntula iodine, World Health Organization umemezele lesi njengesikhathi imisebenzi kuqala.
Okwamanje, uphethwe kuvamile - ngokukhukhumala kwentamo goiter. Izimpawu zayo owabonakaliswa ukubukeka ukukhathala okungamahlalakhona, iziphazamiso lokukhohlwa, isiyezi kanye hoarseness, nobunzima ukugwinya, isifuba esomile lapho ingcindezi ukuzwa endaweni entanyeni.
Isimiso somuntu yegilo ndlala umfaniswano oyiyo, okuyinto siyahlukahluka ukuntula iodine. Ngo ngokukhukhumala kwentamo goiter lakhulisiwe usayizi yegilo ndlala iyunifomu, ngaphandle lwezimpawu.
Kwenye ingxenye yeNingizimu iziguli ukuthi nginesifo goiter nodular. Izimpawu ebonwe ukubukeka yayo isimila esibulalayo, ukwakheka izinhlumba futhi yegilo adenoma, ngenombolo ezinye izifo.
Uma indlala yegilo luyanda kakhulu, futhi ISIZINDA ezincane, isivuno libizwa okuxubile.
Okukhathaza nakakhulu kukhona anobuthi goiter nodular. Izimpawu zako zivamile enkolweni nabesifazane abangaphezu kuka-ezingabantu. Bayakhononda ka palpitation, ukujuluka yanda, kufushane ukugwinya, yanda usayizi ebusweni kwegilo ngaphambili entanyeni.
ISIZINDA e indlala yegilo e amaphesenti angu-85 amacala, izibalo zibonisa, awayona ingozi, kodwa kwezinye izimo, ukwakheka isimila esinomdlavuza.
Ukuxilongwa kanye nokwelashwa of goiter incike izizathu ivela khona. Ezimweni eziningi, ekwelapheni goiter kusetshenziswa imithi ukuthi ugcwalise i-iodine ukuntula noma sikhuthaze uketshezi hormone, ku nxephezela ngenxa yokuntula kwawo umzimba. Ukudla Kunconywa enkulu zihlanganisa kwasolwandle kunothile iodine, kanye labanti ladzingekako kute kuncishiswe ukusetshenziswa nezivimbelakuvunda, itiye eqinile futhi ikhofi, ukudla oily futhi okubabayo, ushokoledi kanye nezinongo.
It esabela kahle ekwelashweni futhi nodular yegilo goiter. nokwelashwa kwayo Kwenziwa kwezokwelapha kanye surgically. Ukukhetha kwenza ukuya endocrinology. Ophumelelayo indlela yokuphathwa ukuthola usizo lwezempilo yegilo iodine enemisebe, esehlisa noma chaza yezingxenye, okuholela uyalulama lingakanani evamile futhi umsebenzi. Kuye nesigaba lesi sifo isinqumo mayelana ISIZINDA ekususeni surgically, futhi umdlavuza - ukususwa share noma sonke indlala. Kulokhu, isiguli kufanele kube sekupheleni kokuphila ukuthatha hormone izidakamizwa.
Pituitary: amahomoni umsebenzi. Indlala pituitary futhi umsebenzi wayo emzimbeni
Indlela ukuqinisa isimiso sezinzwa